सनी देओल १६ वर्षसम्म शाहरुख खानसँग किन बोलेनन् ? अहिले गरे खुलासा | Ratopati
एक टिभी च्यानलसँगको कुराकानीमा सनीले डरको सेटमा भएको मनमुटावबारे खुलेर कुराकानी गरेका छन् । उनले भने, ‘फिल्ममा म कमान्डोको भूमिकामा थिएँ र शाहरुख खानले मलाई चक्कुले हमला गर्नुथियो । म यति फिट थिएँ कि मलाई कसैले (शाहरुख खान) कसरी चक्कु हान्न सक्छ भन्ने लाग्यो ।’
जब सनीलाई शाहरुख खानसँग १६ वर्षसम्म बोल्नुभएन हो ? भन्ने प्रश्न सोधियो तब उनले भने, ‘यस्तो होइन कि म बोल्दै बोलिनँ । थाहा छैन के हो । म खासैसमाजसँग रमाउने मान्छे होइन । कसैसँग धेरै कुरा गर्दिनँ । हाम्रो कहिले भेट नै भएन त कुरा कसरी गर्ने ? म यसै पनि कुनै पनि पार्टीमा जादिनँ, कार्यक्रममा पनि जादिनँ । हामी सँगै काम गर्छौं तर कोहीसँग पनि धेरै कुराकानी गर्दैनौं ।’
डरको सेटमा शाहरुखदेखि निर्देशकसम्म पूरा युनिट उनीसँग डराउँथे हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँहरुभित्र खोट भएका कारण सायद डराउनुभएको होला ।’ त्यसपछि उनी हाँस्न थाले ।